ဗဟုသုတများ Archives - ရတနာသိုက်
Zawgyi ငယျငယျတုနျးက ခနခန ကွားဘူးတယျ ….အောငျဖတေော့ ညောငျးသှားပီ ဆိုတဲ့စကားလုံး……. ခုမှဘဲ အဓိပ်ပါယျ သခြောသိရတော့တယျ… မူရငျးတငျသူဆီက ရှယျမရလို့ ကျောပီယူလာတာ…Credit ပါ ………..//——————————————— မန်တလေးဆိုတာ __ ဂန်တဝငျအရကျသမားမြားပျေါထှနျးရာမွို့ (since 1886 ) mandalay rum ဆိုတာကြုံးရနေဲ့ ခကျြမှ ရတဲ့ ကမ်ဘာ့ no. 1 ဖွဈခဲ့တဲ့ firstclass အိမျရှမေ့ငျးထနျးတောဆိုတာ ကွီးကို ကှနျမွူနဈကော ဗမာ့တပျမတျော ကော( ပွညျတှငျးစဈဖွဈနခြေိနျမှာ) မီးမရှို့ဖို့နဲ့ စခနျးမခဖြို့ နှဈဖကျနားလညျမှု့ယူ ထနျးရညျ သှားသောကျရာနရောငွိမျးခမျြးရေး ဖိုရမျ စဈမဲ့ကငျးစငျဇုံကွီး။ ထနောငျးခေါကျသဘာဝစိမျရညျနဲ့ခကျြတဲ့ တောငျကုနျးကွီးတောအရကျ ဆိုတာမသောကျဖူးသမြှ အောငျပငျလယျ မုယောစပါးနဲ့ခကျြတဲ့ ဆနျအရကျမသောကျဘူးသမြှမငျးကိုယျမငျး ဂန်တဝငျဆနျတဲ့ အရကျသမားပါလို့ငါတို့ မန်တလေးမှာ လာရမျးခှငျ့ မရှိဘူး ညီလေး bedc […]
ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေကို အမြဲအကြံပေးတယ်။ ဒီလိုအကြံပေးပေးလို့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရော လုပ်သလားမေးကြတယ်။ လုပ်ပါတယ်။ အားမြင်မှုရှိသလို ကျရှုံးမှုတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တစ်ခုအောင်မြင်ရင် ကျရှုံးမှုက ၉ ခုလောက်ရှိပါတယ်။ ဘာမဆို အမြဲတမ်း တည်မြဲချင်နေသူပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တည်မြဲခြင်းမရှိသေးဘူး။ အွန်းလိုင်းပေါ်မှာလည်း မတည်မြဲသေးသလို အပြင် စီးပွားရေးလည်း မတည်မြဲသေးပါဘူး။ ပြောရရင် stable မဖြစ်သေးဘူးပေါ့။ ဓာတုသမားဆိုတော့ ဓာတုလိုပြောမိတာပါ။ ပြောချင်တာက အကြောင်းအရာတစ်ခုမှာ ဒီတစ်ယောက်မအောင်မြင်တိုင်း နောက်တစ်ယောက်မအောင်မြင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ပိုင်အတွေးချင်းလည်းမတူညီကျသလို လုပ်ပုံကိုင်ပုံချင်းလည်း မတူနိုင်လို့ပါ။ နယ်ပယ်တော်တော်များများလည်း သွားဖူးရောက်ဖူးသလို မသိတာလည်း မရှိသလောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိုအပ်ချက်တွေရှိတဲ့အတွက် အောင်မြင်မှုမရတာကတော့ ကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေသလို လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေနဲ့လည်း သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဘာပဲလုပ်လုပ် လောင်းကစားဆန်နေခြင်းပါ။ ဘယ်အရာမှ အတိတကျ အောင်မြင်မယ်လို့ မသေချာပါဘူး။ ဥပမာပေါ့ မုန့်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးရောင်းရင် […]
ကလေးများကို ရိုက်သည့် ဆရာ၊ဆရာမများကို ထောင်ခြောက်လနှင့် ဒဏ်ငွေ သုံးသိန်း ချမှတ်မည်
ဆရာသမားများကို အနန္တ ဂိုဏ်းဝင်များအဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန် မာလူမျိုးများက မှတ်ယူထားကြ သည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာသမား များ၏ဆိုဆုံးမစကားများကို လေးစားလိုက်နာ၊ နာယူမှတ်သားကြ သည်။ ဆရာများအနေဖြင့်လည်း ‘ဆရာ့ကျင့်ဝတ်’ ငါးပါးဖြစ်သည့်‘အတတ်လည်းသင်၊ ပဲ့ပြင်ဆုံးမ၊ သိပ္ပမချန်၊ ဘေးရန်ဆီးကာ၊ သင့်ရာအပ်ပို့၊ ဆရာတို့ ကျင့်ဖို့ဝတ်ငါးဖြာ’ဟူသော သင်္ဂဇာဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သင်္ဂါလောဝါဒဆုံးမစာ ပါအတိုင်း တပည့်များအပေါ် ထားရှိရမည့် ကျင့်ဝတ်များ ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြသည်။ ပညာ(အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ)သင်ကြားပို့ချပေးရုံသက် သက်မျှသာမဟုတ်ဘဲ လိမ္မာရေး ခြားရှိလာအောင်၊ လူကောင်းလူတော်ဖြစ်လာအောင်၊ လူရည်မွန်၊ လူရည်ချွန်ဖြစ်လာအောင် ဆိုဆုံးမခြင်းကိုပါ တစ်ပါတည်းပြုလုပ် သွားသူ၊ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသူ မြတ်ဆရာများလည်း အများအ ပြားရှိပါသည်။ ‘မြတ်ဆရာ’ ဟူသည် ‘ရှေးရှုမေတ္တာ၊ ကရုဏာနှင့် နာနာကျင်ကျင်၊ အပြစ်မြင်တိုင်း၊ ဝမ်းတွင်မသို၊ ဟုတ်တိုင်းဆို၍၊ ကျိုးလိုစိတ်က […]
အမျိုးသမီးတွေဟာ အပြင်ပုံပန်းသွင်ပြင်အရ အမျိုးသားတွေထက် အားနည်းတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် အခုဖော်ပြပေးမယ့် စူပါပါဝါတွေကတော့ အမျိုးသမီးတွေမှာပဲ ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ကိုယ်ခံအားစနစ်ပိုမို ကောင်းမွန်ကြတယ် လူတွေရဲ့အမြင်မှာတော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အားနွဲ့သူတွေလို့ ထင်ရပေမယ့် ဆေးပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာချက်အရ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ် ပိုမိုကောင်းမွန်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အသက်ကြီး လာတာနဲ့အမျှ ကိုယ်ခံအားစနစ်အားနည်းလာတတ်ကြပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက်ပိုပြီး အသက်ပိုရှည်တတ်ကြပြီး ဒါဟာ ကိုယ်ခံအားစနစ်နဲ့လည်း ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ဆေးပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာချက်တွေက ဆိုပါတယ်။ (၂) အန္တရာယ်ကို ကြိုမြင်နိုင်တဲ့ အာရုံခံစားမှုရှိကြတယ် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဂျပန်နိုင်ငံကျိုတိုတက္ကသိုလ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေ့လာချက်တွေအရ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသား တွေထက် အန္တရာယ်ကို ကြိုမြင်နိုင်တဲ့ အာရုံခံစားမှုရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ အမျိုးသမီးတွေမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီး ဟော်မုန်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ဓမ္မတာလာနေစဉ်အချိန်တွေမှာ […]
အလုပ်ကို ဦးစားပေးသူများအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဖုန်းရုံအရွယ်အစား အလုပ်ခန်းများ
ဂျပန်နိုင်ငံသည် အလုပ်နှင့်လက်မပြတ်သည့်နိုင်ငံများတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ထိုနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်သူအားလုံးက အချိန်ကိုပိုတန်ဖိုးထားသည်။ သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်ပေါ်သည့်ယာဉ်ကြောကျပ်မှုနှင့် အဝေးတစ်နေရာတွင် ရာက်နေစဉ် အရေးကြီးသော အလုပ်များ ပေါ်လာခြင်းတို့က ၎င်းတို့၏အလုပ်အပေါ် မလိုအပ်ဘဲ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထိုသို့သော အနှောင့်အယှက်များကို ကင်းဝေးစေသည့်တီထွင်ကြံဆမှုက လူအများဆုံးရှိတတ်သည့် နေရာများတွင် အလုပ်ခန်းထားပေးရန်ဖြစ်သည်။ ၁ ဒသမ ၂ စတုရန်းမီတာ အကျယ်သာရှိသည့် ဖုန်းရုံပုံစံအလုပ်ခန်းများက မီးရထား ဘူတာရုံများ၊ လေဆိပ်များနှင့် မိုးမျှော်တိုက်ကြီးများတွင် နေရာယူလာတော့မည် ဖြစ်သည်။ တယ်လီကျူ့ဟု အမည်ပေးထားသည့် ထိုအလုပ်ခန်းများတွင် ထိုင်ခုံတစ်လုံး၊ စားပွဲတစ်လုံးနှင့် မီးပလတ်ပေါက်တို့ပါ ဝင်သည်။ မစ်ဆူဘီရှီအက်စတိတ်၊ အိုကာမူရာကော်ပိုရေးရှင်း၊ ဗီကျူ့နှင့် တယ်လီကျူ့ကုမ္ပဏီတို့ ပူးတွဲထုတ်လုပ်ထားသည့် ထိုအလုပ်ခန်း စုစုပေါင်း ၁ဝဝဝ ကို ၂ဝ၂၃ ခုနှစ်ရောက်သည့်အချိန်တွင် အပြီးတပ်ဆင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ယခင်က ကော်ဖီဆိုင်များ၌ […]
သစ်တောပြုန်းတီးမှုကို ကာကွယ်ဖို့ ထိုင်းစစ်တပ်မှ သစ်စေ့ပေါင်း ၉ သိန်းခန့် ကောင်းကင်ပေါ်မှ ကြဲချ
သစ်တောပြုန်းတီးမှုဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ ကမ္ဘာနဲ့တဝှမ်း ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြသနာတခုဖြစ်ပြီး သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်တွေ ဖြစ်ပွားစေတဲ့ မူလအရင်းအမြစ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေတည်းကစပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ထိန်းချုပ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပေမယ့် တနှစ်ထက်တနှစ် ရာသီဥတု ဆိုးရွားမှုတွေနဲ့သာ တကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့တော့ သစ်တောပြုန်းတီးမှုကို ကာကွယ်ဖို့ လျင်မြန် လွယ်ကူပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ထားတဲ့ အစီအစဉ်တခုကို ဖော်ဆောင်လိုက်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သစ်တောပြုန်းတီးမှုကို ကာကွယ်ဖို့ ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အစီအစဉ်ကတော့ နိုင်ငံပိုင် စစ်တပ်သုံး လေယာဉ်တွေကို အသုံးချပြီး သစ်စေ့တွေကို ကောင်းကင်ကနေ ကြဲချတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်တွေနဲ့ ကြဲချလိုက်တဲ့ အဲဒီ သစ်စေ့တွေဟာဆိုရင်တော့ ပျက်စီးနေတဲ့ မြေနေရာတွေနဲ့ […]
ဖုန်းကြည့်တာများလွန်းလို့ (၄)နှစ်အရွယ်မှာပဲ မျက်လုံးခွဲစိတ်မှုခံယူခဲ့ရ
အသက်(၄)နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ ဖုန်းအသုံးပြုတာ များလွန်းတဲ့အတွက် အသက်ငယ်ငယ်မှာပဲ မျက်လုံးခွဲစိတ်မှု ခံယူခဲ့ရပါတယ်။ ဒီသတင်းဟာ ကလေးကို အလိုလိုက်ပြီး ဖုန်းပေးကိုင်တဲ့ မိဘတွေအတွက် သတိထားစရာပါ။ ဖုန်းကထုတ်လွှတ်တဲ့ အလင်းတန်းတွေဟာ- ကလေးရဲ့ မျက်သားနုနုတွေကို ထိခိုက်မှုမြန်စေပါတယ်။ လူကြီးတွေထက် ပိုပြီး ထိခိုက်မှုမြန်စေတဲ့အတွက်၊ ကလေးကို ချစ်ရင် ဖုန်းပေးမကိုင်ကြဖို့၊ ဒီလိုပဲ ကွန်ပျူတာနဲ့ Tablet တွေကိုလည်း ပေးမသုံးသင့်ဘူးလို့ အကြံပြုနေကြပါတယ်။ အခု ကလေးမလေးကတော့ လက်တွေ့သက်သေပါဘဲ။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကလေးမလေးရဲ့ဖခင် Dachar Nuysticker Chuayduang က ဒီအကြောင်းကို လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Dachar ရဲ့ ပြောဆိုချက်အရ သူတို့ဟာ ကလေး (၂)နှစ်အရွယ်ကတည်းက ဖုန်းပေးသုံးခဲ့တာပါတဲ့။ ဖုန်းပေးသုံးခြင်း အကြောင်းအရင်းကတော့ သူဟာ အလုပ်များသူဖြစ်သည့်အလျှောက် […]
အင်ဒိုနီးရှားရှိ အဝလွန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချနေရ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၌ အဝလွန်ရောဂါကို တိုက်ဖျက်နေစဉ် အရှေ့ဂျာဗားပြည်နယ်ရှိ အဝလွန်နေသောရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ဝ ခန့်မှာ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရေးအတွက် အေရိုးဗစ်၊ ရေကူးခြင်းနှင့်ပြေးခြင်းတို့ ပါဝင်သော သီတင်းပတ်နှစ်ပတ်ကြာ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်နေရကြောင်း သိရသည်။ ထိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များသည် စံချိန်ညီကိုယ် အလေးချိန်မရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့် အဝလွန်မှုကို မဖြစ်မနေလျှော့ချရန် အာဟာရ ဗေဒပညာရှင်များနှင့် ဆေးဘက်ပညာရှင်များထံမှ လမ်းညွှန်ချက်ကိုလည်း ရရှိထားကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဖရန်းဘာရန်မာဂါရက ပြောသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးအတွက် စံနမူနာပြ ကိုယ်အလေးချိန်မှာ ၎င်း၏အရပ်အမြင့် (စင်တီမီတာများ)ထဲမှ ၁၁ဝ ကိုနုတ်ခြင်းဖြင့် ရရှိလာသည့် ရလဒ် ကီလိုဂရမ်ဖြစ်သင့်သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့က သတ်မှတ်ထားကြောင်းနှင့် ယင်းအစီအစဉ်ကို ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး၌ တိုးချဲ့ရန် အလားအလာရှိကြောင်း သိရသည်။ အင်ဒိုနီးရှား၌ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်း အဝလွန်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားပြီး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့၏ […]
အသက်(၆)နှစ်သာရှိပေမဲ့ ကိုယ်ပိုင်ငွေဖြင့် ငါးထပ်တိုက်ဝယ်နိုင်သူ
ကိုရီးယားက အသက်(၆)နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကတော့ လူတိုင်း လက်လှမ်းမီဖို့ ခဲယဉ်းလှတဲ့ အဆင့်မြင့် (၅)ထပ်ဇိမ်ခံအိမ်ကြီးကို ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမ ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ ငွေပမာဏကတော့ ဒေါ်လာ (၈)သန်းပါ။ ဒီပမာဏဟာ ကိုရီးယားဝမ်နဲ့ဆိုရင် (၉၄၇၂)သန်းဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့ သန်းပေါင်း (၁၂၀၉၀)သန်းအထိ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပမာဏဟာ လူသန်းပေါင်းများစွာမှာ တစ်ယောက် ဒီလိုအရွယ်မှာ ရှာဖို့ရှာမလွယ်နိုင်တဲ့ ပမာဏာပါ။ ကလေးမလေးရဲ့နာမည်ကတော့ Boram ပါ။ သူမဟာ ကိုယ်ပိုင် YouTube ချန်နယ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Boram Tube Vlog နဲ့ Boram Tube ToysReview တို့မှာပင်တိုင်တင်ဆက်နေသူဖြစ်ပြီး၊ ချန်နယ်နှစ်ခုပေါင်းမှာ Follower ပေါင်း (၃၂)သန်းအထိ ရှိပါတယ်။ ဒီများပြားလှတဲ့ ဖော်လိုဝါတွေကြောင့်- Boram ရဲ့ဝင်ငွေဟာ ထိပ်သီးအဆင့်မှာရှိနေပြီး၊ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး […]
အသက် ၄၀ ကျော် ယောက်ျားတို့ ဖောက်ပြန်ပုံ
အသက်၄၅ လောက် ကလေး၃ယောက်အဖေဟာ ရွယ်တူ သူ့မိန်းမကို အသက်ကြီးပြီ ငြီးငွေ့ ပြီဆိုပြီး ကောင်မလေးငယ်ငယ်ရှာပါတယ်😠😠 ထုံးစံအတိုင်း FB ကနေ အသက်၂၂နှစ် အချောစား မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ချိတ်မိပါတယ် အပျော်ရှာချင်ပေမဲ့ အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ ကလေးတွေ အမေ ကိုလည်း မကွဲချင်တဲ့ ဒီလူအတွက် ပိုအဆင်ပြေစေတာက ကောင်မလေးကလည်း အိမ်ထောင်ရှိတာလည်းသိ ဒီအိမ်ထောင်ကိုလည်း ဖျက်စီးလိုတဲ့ စိတ်မရှိ တိတ်တဆိတ် ချစ်နေ ပေးဆပ်နေရရင် ကျေနပ်ပါသတဲ့ အရမ်းချစ်လို့ပါတဲ့ တစ်လကို ငွေ၁သိန်းလောက် ပေးကမ်းထောက်ပံ့ရတာကလည်း ဒေါ်လာစား ဒီလူအတွက် အေးဆေးပါပဲ သူ ကံကောင်းလွန်းလို့ သူနဲ့မှ အနစ်နာခံပေးဆပ်ချစ်သူချောချော သန့်သန့်လေးကိုရတာပါဆိုပဲ အဲဒီလိုနဲ့ ၁ပါတ်၁ရက်လောက် ကောင်မလေးနဲ့သွားနေ ပုံမပျက် မိန်းမနဲ့လည်းပေါင်းသင်း ပျော်ပျော်ကြီးနေလာလိုက်တဲ့ တစ်နှစ်လောက်အတွင်း မိန်းမ က ခနနဖျား နေမကောင်း […]